GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga German Greek Gujarati Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Moore Persian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian
Ọ̀ NA-ATỌ gị ụtọ ịkọwa ihe omimi? Iji mee otú ahụ, ị ga-achọ ihe ndị ga-enyere gị aka inweta nkọwa ya. N’Okwu ya e dere n’ike mmụọ nsọ, Chineke na-enye ihe ndị ga-enye aka ịghọta nọmba ahụ bụ́ 666, aha, ma ọ bụ akara anụ ọhịa ahụ dị ná Mkpughe isi 13.
N’isiokwu a, anyị ga-atụle ụzọ iche echiche anọ bụ́ isi—ihe enyemaka ndị dị mkpa—ndị ga-ekpughe ihe akara anụ ahụ pụtara. Anyị ga-atụle (1) otú e si ahọrọ aha Bible mgbe ụfọdụ, (2) ihe ndị e ji mara anụ ọhịa ahụ, (3) ihe 666 ịbụ “nọmba nke mmadụ” pụtara, nakwa (4) ihe nọmba ahụ bụ́ 6 pụtara na ihe mere e ji dee ya ugboro atọ, nke bụ́, 600 a gbakwụnyere 60, gbakwụnyekwa ya 6, ma ọ bụ 666.—Mkpughe 13:18.
Aha Bible—Ha Abụghị Nanị Njimara
Aha Bible na-enwekarị ihe pụrụ iche ha pụtara, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ Chineke nyere ha. Dị ka ihe atụ, n’ihi na Ebram ga-aghọ nna nke ọtụtụ mba, Chineke gbanwere aha nna ochie ahụ ịbụ Ebreham, nke pụtara “nna nke ìgwè mba.” (Jenesis 17:5) Chineke gwara Josef na Meri ka ha kpọọ nwa Meri gaje ịmụ n’ọdịnihu Jizọs, nke pụtara “Jehova Bụ Nzọpụta.” (Matiu 1:21, ihe odide ala ala peeji nke NW; Luk 1:31) N’ikwekọ n’aha ahụ nwere ihe pụrụ iche ọ pụtara, site n’ozi na ọnwụ ịchụàjà Jizọs, Jehova mere ka nzọpụta anyị kwe omume.—Jọn 3:16.
N’ihi ya, nọmba ahụ bụ́ aha nke Chineke nyere bụ́ 666 aghaghị ịnọchi anya ihe Chineke weere dị ka ihe ndị e ji mara anụ ọhịa ahụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, iji ghọta ihe ndị ahụ, ọ dị anyị mkpa ịmata anụ ọhịa ahụ n’onwe ya na ọrụ ya.
E Kpughee Anụ Ọhịa Ahụ
Akwụkwọ Bible bụ́ Daniel mere ka a matakwuo ihe anụ ọhịa ihe atụ dị iche iche pụtara. Isi 7 nwere nkọwa doro anya nke “anụ ọhịa anọ nke dị ukwuu”—ọdụm, bea, agụ, nakwa anụ ọhịa dị egwu nke nwere nnukwu ezé ígwè. (Daniel 7:2-7) Daniel na-agwa anyị na anụ ọhịa ndị a na-anọchi anya “ndị eze,” ma ọ bụ alaeze ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche, bụ́ ndị na-anọchi ibe ha n’ịchị alaeze ukwu dị iche iche.—Daniel 7:17, 23.
Banyere anụ ọhịa nke Mkpughe 13:1, 2, akwụkwọ bụ́ The Interpreter’s Dictionary of the Bible mere ka ọ pụta ìhè na ọ “na-ejikọta n’onwe ya ihe nile e ji mara anụ ọhịa anọ ahụ dị n’ọhụụ Daniel . . . N’ihi ya, anụ ọhịa mbụ a [nke Mkpughe] na-anọchi anya ikike e jikọtara ọnụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nile na-emegide Chineke n’ụwa.” Mkpughe 13:7 kwadoro ihe ahụ e kwuru n’elu mgbe ọ na-ekwu banyere anụ ọhịa ahụ, sị: “E nyekwara ya ikike n’ebe ebo na ndị na asụsụ na mba ọ bụla dị.” *
N’ihi gịnị ka Bible ji eji anụ ọhịa eme ihe atụ nke ọchịchị ụmụ mmadụ? Ọ dịkarịa ala, n’ihi ihe abụọ. Nke mbụ, ọ bụ n’ihi ihe ndekọ nke ịwụfu ọbara dị ka anụ ọhịa nke ọchịchị nweworo kemgbe ọtụtụ narị afọ. “Agha bụ otu n’ime ihe ndị na-adịgide adịgide n’akụkọ ihe mere eme,” ka ndị na-akọ akụkọ ihe mere bụ́ Will na Ariel Durant dere, “mmepeanya ma ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya emebeghị ka o belata.” Lee ka o si bụrụ eziokwu na “mmadụ nwere ike n’ahụ́ mmadụ ibe ya imejọ ya”! (Eklisiastis 8:9) Nke abụọ bụ na “dragọn ahụ [Setan] nyekwara anụ ọhịa ahụ ike ya na ocheeze ya na ikike dị ukwuu.” (Mkpughe 12:9; 13:2) N’ihi ya, ọchịchị ụmụ mmadụ sitere n’aka Ekwensu, si otú a na-egosipụta àgwà anụ ọhịa ya yiri nke dragọn.—Jọn 8:44; Ndị Efesọs 6:12.
Otú ọ dị, nke a apụtaghị na onye ọchịchị ọ bụla bụ́ mmadụ bụ nanị ngwá ọrụ Setan. N’ezie, n’otu echiche, ọchịchị ụmụ mmadụ bụ “onye na-ejere Chineke ozi,” na-eme ka ọha mmadụ dị n’usoro, nke ọ ga-abụ e wezụga ya, ọgba aghara ejupụta ebe nile. Ụfọdụ ndị isi echebewo ihe ndị bụ́ isi ruuru mmadụ, ndị na-agụnye ikike nke ife ezi ofufe—bụ́ ihe Setan na-achọghị. (Ndị Rom 13:3, 4; Ezra 7:11-27; Ọrụ 13:7) N’agbanyeghị nke ahụ, n’ihi mmetụta Ekwensu, ọ dịbeghị mmadụ ma ọ bụ òtù ụmụ mmadụ nwetụrụla ike iwetara ndị mmadụ udo na nchebe na-adịgide adịgide. *—Jọn 12:31.
“Nọmba Ụmụ Mmadụ”
Ihe nke atọ ga-enyere anyị aka ịmata ihe 666 pụtara dabeere n’ihe mere e ji kpọọ ya “nọmba nke mmadụ,” ma ọ bụ dị ka The Amplified Bible si sụgharịa ya, “nọmba ụmụ mmadụ.” Okwu a apụghị izo aka n’ebe otu mmadụ nọ, n’ihi na ọ bụ Setan—ọ bụghị mmadụ ọ bụla—nwere ikike n’ebe anụ ọhịa ahụ dị. (Luk 4:5, 6; 1 Jọn 5:19; Mkpughe 13:2, 18) Kama nke ahụ, anụ ọhịa ahụ inwe ‘nọmba, ma ọ bụ akara ụmụ mmadụ,’ na-enye echiche na o nwere ọdịdị nke mmadụ, ọ bụghị nke mmụọ ma ọ bụ mmụọ ọjọọ, nakwa na ọ na-egosipụta àgwà ụfọdụ nke mmadụ. Gịnị ka àgwà ndị ahụ pụrụ ịbụ? Bible na-aza, sị: “Mmadụ nile emehiewo, gharakwa iru ebube Chineke.” (Ndị Rom 3:23) N’ihi ya, anụ ọhịa ahụ inwe “nọmba ụmụ mmadụ” na-egosi na ọchịchị dị iche iche na-egosipụta ọnọdụ nke ụmụ mmadụ dara ada, nke e ji mmehie na ezughị okè mara.
Akụkọ ihe mere eme na-egosi na nke a bụ eziokwu. “Mmepeanya ọ bụla nke dịworo mgbe ọ bụla mesịrị daa,” ka onye bụbu Odeakwụkwọ nke Mba United States bụ́ Henry Kissinger kwuru. “Akụkọ ihe mere eme bụ akụkọ banyere mgbalị ndị daworo ada, banyere ọchịchọ ndị a na-enwetaghị. . . . Ya mere, dị ka ọkọ akụkọ ihe mere eme, mmadụ aghaghị ịnakwere na a pụghị izere ọdachi.” Nnyocha a Kissinger ji ezi obi mee na-agba akaebe nye eziokwu a bụ́ isi nke Bible: “Ọ bụghị n’aka ya onwe ya ka ụzọ mmadụ dị: ọ bụghị onye ọ bụla nke na-eje ije nwe ime ka nzọụkwụ ya guzosie ike.”—Jeremaịa 10:23.
Ugbu a anyị mataworo anụ ọhịa ahụ ma ghọta otú Chineke si ele ya anya, anyị nweziri ike inyocha akụkụ ikpeazụ nke ihe omimi anyị—nọmba ahụ bụ́ isii na ihe mere e ji dee ya ugboro atọ—ya bụ, 666, ma ọ bụ 600 a gbakwụnyere 60, gbakwụnyekwa ya 6.
Isii E Dere Ugboro Atọ —N’ihi Gịnị?
N’ime Akwụkwọ Nsọ, nọmba ụfọdụ nwere ihe ha nọchiri anya ha. Dị ka ihe atụ, a na-ejikarị nọmba ahụ bụ́ asaa eme ihe iji nọchie anya ihe zuru ezu, ma ọ bụ zuo okè, n’anya Chineke. Dị ka ihe atụ, ihe mejupụtara izu okike ihe Chineke bụ “ụbọchị” ma ọ bụ ogologo oge asaa, bụ́ nke Chineke ji rụzuo ọrụ ike ihe ya n’ụwa kpam kpam. (Jenesis 1:3-2:3) “Okwu ọnụ” Chineke dị ka ọlaọcha nke “e sichaworo ugboro asaa,” si otú ahụ bụrụ nke a nụchara n’ụzọ zuru okè. (Abụ Ọma 12:6; Ilu 30:5, 6) A gwara Neeman onye ekpenta ka ọ saa ahụ́ ugboro asaa n’Osimiri Jọdan, mgbe o mesịkwara nke ahụ, a gwọrọ ya kpam kpam.—2 Ndị Eze 5:10, 14.
Isii bụ asaa e wepụrụ otu. Ọ́ gaghị abụ ihe nnọchianya dabara adaba nke ihe na-ezughị okè, ma ọ bụ ihe gbara ọrụ, n’anya Chineke? Ee, ọ bụ! (1 Ihe E Mere 20:6, 7) Ọzọkwa, ide isii ugboro atọ, dị ka 666, na-emesi nnọọ ezughị okè ahụ ike. Eziokwu ahụ bụ́ na 666 bụ “nọmba ụmụ mmadụ,” dị ka anyị tụleworo, na-egosikwu na nke a bụ echiche ziri ezi. N’ihi ya, ihe ndekọ nke anụ ọhịa ahụ, “nọmba ụmụ mmadụ” ya, na nọmba 666 ahụ n’onwe ya na-arụtụ aka n’otu nkwubi okwu na-enweghị mgbagha—erutụghị eru na ọdịda kpam kpam n’anya Jehova.
Nkọwa nke erughị eru nke anụ ọhịa ahụ na-echetara anyị ihe e kwuru banyere Eze Belshaza nke Babilọn oge ochie. Site n’ọnụ Daniel, Jehova gwara onye ọchịchị ahụ, sị: “A tụwo gị n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀, hụ na ihe kọrọ n’ime gị.” Kpọmkwem n’abalị ahụ, e gburu Belshaza, Alaeze Ukwu Babilọn dị ike adaakwa. (Daniel 5:27, 30) N’otu aka ahụ, ikpe Chineke megide anụ ọhịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ na ndị nile nwere akara ya ga-apụtara anụ ọhịa ahụ na ndị na-akwado ya mbibi. Otú ọ dị, n’ime nke a, Chineke ga-ekpochapụ ọ bụghị nanị otu usoro ọchịchị kama ọchịchị nile nke ụmụ mmadụ. (Daniel 2:44; Mkpughe 19:19, 20) Ya mere, lee ka o si dị mkpa ka anyi zere inweta akara ahụ na-egbu egbu nke anụ ọhịa ahụ!
A Kọwaa Akara Ahụ
Ozugbo o mesịrị ka a ghọta nọmba 666 ahụ, Mkpughe kpọtụrụ ụmụazụ dị 144,000 nke Nwa Atụrụ ahụ, bụ́ Jizọs Kraịst aha, bụ́ ndị e dere aha ya na aha Nna ya, bụ́ Jehova, n’egedege ihu ha. Aha ndị a na-eme ka a mata ndị bu ha dị ka ndị Jehova na Ọkpara ya nwe, bụ́ ndị ha ji obi ụtọ na-agba àmà banyere. N’otu aka ahụ, ndị nwere akara anụ ọhịa ahụ na-egosipụta na ha na-ejere anụ ọhịa ahụ ozi. Ya mere, akara ahụ, ma è dere ya n’aka nri ma ọ bụ n’egedege ihu, n’ụzọ ihe atụ, bụ ihe na-eme ka a mata onye bu ya dị ka onye na-enye usoro ọchịchị ụwa nke yiri anụ ọhịa nkwado n’ụdị ofufe. Ndị nwere akara ahụ na-enye “Siza” ihe ruuru Chineke. (Luk 20:25; Mkpughe 13:4, 8; 14:1) N’ụzọ dị aṅaa? Site n’inye ọchịchị, ihe nnọchianya ya, na ike agha ya, bụ́ nke ha na-elegara anya maka nzọpụta, nsọpụrụ n’ụdị ofufe. Ofufe ọ bụla ha na-enye ezi Chineke ahụ bụ́ nanị n’elu ọnụ.
N’ụzọ megidere nke ahụ, Bible na-agba anyị ume, sị: “Unu atụkwasịla obi n’ahụ́ ndị a maara aha ha, ma ọ bụ n’ahụ́ nwa nke mmadụ, onye ọ na-adịghị nzọpụta o nwere. Mmụọ ya na-apụ apụ, o wee laghachi n’ala o si pụta; n’ụbọchị ahụ echiche ya nile alawo n’iyi.” (Abụ Ọma 146:3, 4) Ndị na-aṅa ntị na ndụmọdụ a amamihe dị na ya adịghị enwe nkụda mmụọ mgbe ndị ọchịchị na-emezughị nkwa ndị ha kwere ma ọ bụ mgbe ndị ndú na-adọrọ adọrọ tụfuru ọnọdụ ha.—Ilu 1:33.
Nke a apụtaghị na ezi Ndị Kraịst adịghị eme ihe ọ bụla banyere ọnọdụ ọjọọ nke ihe a kpọrọ mmadụ nọ na ya. Kama nke ahụ, ha ji ịrụsi ọrụ ike na-akpọsa otu ọchịchị nke ga-edozi nsogbu nke ihe a kpọrọ mmadụ—Alaeze Chineke, bụ́ nke ha na-anọchite anya ya.—Matiu 24:14.
Alaeze Chineke—Nanị Olileanya Dịịrị Ihe A Kpọrọ Mmadụ
Mgbe ọ nọ n’ụwa, Jizọs mere Alaeze Chineke isiokwu nke nkwusa ya. (Luk 4:43) N’ekpere ihe atụ ya, bụ́ nke a na-akpọkarị Ekpere Nna Anyị nke Bi n’Eluigwe, Jizọs kụziiri ụmụazụ ya ka ha na-ekpe ekpere ka Alaeze ahụ bịa nakwa ka e mee uche Chineke n’ụwa ebe a. (Matiu 6:9, 10) Alaeze ahụ bụ ọchịchị nke ga-achị ụwa dum, ọ bụghị site n’isi obodo dị n’ụwa, kama site n’eluigwe. N’ihi ya, Jizọs kpọrọ ya “alaeze nke eluigwe.”—Matiu 11:12.
Olee onye ruru eru ịbụ Eze nke Alaeze ahụ karịa Jizọs Kraịst, bụ́ onye nwụrụ n’ihi ndị ọ ga-achị n’ọdịnihu? (Aịsaịa 9:6, 7; Jọn 3:16) N’oge na-adịghị anya, Onye Ọchịchị a zuru okè, onye bụ́ ugbu a mmụọ dị ike, ga-atụba anụ ọhịa ahụ, ndị eze ya, na usuu ndị agha ya n’ime “ọdọ ọkụ ahụ nke ji sọlfọ na–enwu ọkụ,” bụ́ ihe nnọchianya nke mbibi zuru ezu. Ma ọ bụghị ebe ahụ ka okwu biri. Jizọs ga-ebibikwa Setan, bụ́ ihe ọ na-adịghị mmadụ ọ bụla ga-emeli ya.—Mkpughe 11:15; 19:16, 19-21; 20:2, 10.
Alaeze Chineke ga-ewetara ndị nile na-erube isi ọ na-achị udo. (Abụ Ọma 37:11, 29; 46:8, 9) Ọbụna iru újú, ihe mgbu, na ọnwụ agaghịzi adị. Lee atụmanya dị ebube nke a bụụrụ ndị na-anataghị akara nke anụ ọhịa ahụ!—Mkpughe 21:3, 4.
^ par. 9 Maka ntụle zuru ezu nke amaokwu ndị a, lee isiakwụkwọ nke 28 nke akwụkwọ bụ́ Mkpughe—Mmezu Ya Dị Ebube Dị Nso!, nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
^ par. 11 Ọ bụ ezie na ha maara na ọchịchị ụmụ mmadụ na-emekarị ka anụ ọhịa, ezi Ndị Kraịst na-edo onwe ha n’okpuru “ikike ndị ka elu” nke ọchịchị, dị ka Bible kwuru ka e mee. (Ndị Rom 13:1) Otú ọ dị, mgbe ndị ọchịchị dị otú ahụ nyere iwu ka ha mee ihe megidere iwu Chineke, ha ‘na-erubere Chineke isi dị ka onye na-achị achị karịa mmadụ.’—Ọrụ 5:29.
Ihe Ndị Na-enye Aka Ịghọta Ihe 666 Pụtara
1. Aha Bible na-egosikarị ihe ụfọdụ banyere àgwà ma ọ bụ ndụ ndị na-aza ha, dị ka ọ dị n’ihe banyere Ebreham, Jizọs, na ọtụtụ ndị ọzọ. N’otu aka ahụ, nọmba aha nke anụ ọhịa ahụ na-anọchi anya ihe ndị e ji mara ya.
2. N’akwụkwọ Bible bụ́ Daniel, anụ ọhịa ndị ahụ dịgasị iche iche na-anọchi anya alaeze ma ọ bụ alaeze ukwu dị iche iche nke ụmụ mmadụ bụ́ ndị na-anọchi onwe ha. Anụ ọhịa ọtụtụ ihe mejupụtara nke Mkpughe 13:1, 2 na-anọchi anya usoro ọchịchị zuru ụwa ọnụ, nke Setan na-enye ike ma na-achịkwa.
3. Anụ ọhịa ahụ inwe “nọmba nke mmadụ,” ma ọ bụ “nọmba ụmụ mmadụ,” na-egosi na o nwere ọdịdị nke mmadụ, ọ bụghị nke mmụọ ọjọọ. N’ihi ya, ọ na-egosi erughị eru nke ụmụ mmadụ nke mmehie na ezughị okè na-akpata.
4. N’anya Chineke, nọmba ahụ bụ́ isii, bụ́ nke na-erughị nọmba izu ezu ma ọ bụ izu okè nke Bible, bụ́ asaa, na-ezo aka n’ezughị okè. Akara ahụ bụ́ 666 na-emesi erughị eru ahụ ike site n’inwe nọmba ahụ ugboro atọ.
Ọchịchị ụmụ mmadụ adawo, nọmba ahụ bụ́ 666 gosiri nnọọ nke ahụ
Nwata agụụ na-agụgbu: MBA NDỊ DỊ N’OTU/Foto F. GRIFFING sere
Jizọs Kraịst ga-eweta ọchịchị zuru okè n’ụwa